Ukuthi Izixazululo Zokubuyela Emuva Zingahlehlisa Kanjani Ukubuyisela Ukucubungula Emakethe Ye-E-Commerce | Martech Zone
Ubhubhane lwe-COVID-19 nalo lonke ulwazi lokuthenga lwashintsha ngokuzumayo nangokuphelele. Ngaphezu kwe 12,000 izitolo zezitini nodaka zavalwa ngo-2020 njengoba abathengi bethutha beyothenga ku-inthanethi besuka ekunethezekeni nasekuphepheni kwamakhaya abo. Ukuhambisana nokushintsha kwemikhuba yabathengi, amabhizinisi amaningi andise ukuba khona kwawo kwe-e-commerce noma athuthele ekuthengiseni ku-inthanethi okokuqala ngqa. Njengoba izinkampani ziqhubeka nokwenza lolu shintsho lwedijithali endleleni entsha yokuthenga, zihlatshwa umxhwele iqiniso eliyisisekelo lokuthi njengoba ukuthengiswa kwe-inthanethi kwanda, nembuyiselo iyakhula.
Ukuze uhambisane nesidingo sokucutshungulwa kwembuyiselo yamakhasimende, abathengisi kufanele basebenzise izinto eziqinile, ezinikwe amandla ezobuchwepheshe ukuze basize ukuhlela inqubo yembuyiselo, baqede umsebenzi wokubuyisela umgunyathi, futhi bazuze umkhawulo wenzuzo enkulu. Ukuzama ukudabula emanzini adungekile wokucutshungulwa kwembuyiselo kungaba inqubo ekhohlisayo edinga usizo lochwepheshe kwezokuthutha eziphuma ngaphandle. Ngokusebenzisa amandla a Ibuyisela Uhlelo Lokuphatha (I-RMS) ngokubonakala okuthuthukisiwe nabathengisi bokulandelela okuthuthukile bangaphatha kangcono ukubuyisela, bathuthukise indlela yabo yemali engenayo, futhi bathuthukise izilinganiso zamakhasimende.
Iyini i-Returns Management System (RMS)?
Inkundla ye-RMS isebenzisa ukugeleza komsebenzi okulungisekayo kwembuyiselo ukuze ilawule futhi ilandelele zonke izici zohambo lomkhiqizo obuyisiwe, kusukela ngesikhathi isicelo sithunyelwa ngaso kuze kube isikhathi lapho umkhiqizo wangempela ubuyiselwa ohlwini lwamagama lwenkampani oluzodayiswa kabusha, kanye nembuyiselo yekhasimende sekuqediwe.
Inqubo iqala ngokuqaliswa kokubuyisela, okwenziwa kusebenze lapho umthengi ecela ukubuyiselwa. Umgomo wesixazululo se-RMS uwukuqinisekisa ukuthi ulwazi lwekhasimende lokubuyisela lujabulisa njengoba inqubo yokuthenga yayinjalo. Isixazululo se-RMS siklanyelwe ukusiza izinkampani zithuthukise isevisi yazo yamakhasimende ngokusebenzisa ukuxhumana okuzenzakalelayo ukuze zinikeze umthengi izibuyekezo ekubuyeni kwabo, okususa isidingo sezingcingo zokulandelela nama-imeyili emaqenjini esevisi yamakhasimende.
Uma isicelo sesingenile, isixazululo sizohlinzeka umdayisi ngokubonakala nemininingwane yedatha ngesizathu(zi)mbuyiselo ukuze abikezele izindleko nesikhathi esihlotshaniswa nembuyiselo yesikhathi esizayo futhi aqaphe noma yimuphi umsebenzi ongajwayelekile, ongase ube nokukhwabanisa owenziwa yikhasimende. Ziningi izindlela umthengi angenza ngazo ukukhwabanisa noma ukubuyisela ukuhlukumeza, kodwa zonke ziholela enkingeni eyodwa enkulu kubathengisi - izindleko.
Ukusetshenziswa kabi kwabathengi kwezinqubomgomo zembuyiselo kubiza amabhizinisi kuze kufike lapho $ 15.9 billion unyaka ngamunye.
I-National Retail Federation
Ukubonakala okunikezwa isixazululo esiqinile se-RMS phakathi nezigaba zokuqala zokubuyisela kungasindisa abathengisi be-inthanethi izindleko zezinkanyezi. Uma imbuyiselo isithunyelwe, isinyathelo esilandelayo ukunquma ukuthi ingabe izindleko zomkhiqizo obuyisiwe zibiza kancane kunokuwubuyisela emuva endaweni yokugcina impahla yenkampani. Lokhu kubaluleke kakhulu kumabhizinisi e-e-commerce omhlaba wonke abhekene nezindleko eziphezulu zokuthumela. Kwezinye izimo, ibhizinisi lingase lithumele ikhasimende umkhiqizo omusha futhi lilitshele ukuthi ligcine omdala. Inkundla ye-RMS iletha idatha edingekayo ukwenza lezi zinqumo.
Ezinye izindawo zokugcina izimpahla zigcwala imbuyiselo, ngakho-ke isixazululo se-RMS singanquma ukuthi iyiphi indawo esebenza kangcono ngokususelwe ezidingweni zabo zokugcwaliswa kwempahla nokuthi ziseduze kangakanani nendawo yekhasimende. Uma isiza sesikhethiwe, umkhiqizo ungalungiswa futhi uhlolwe okubonakala kudingekile ngaphambi kokuba ulungele ukubuyela ku-inventory.
Isinyathelo sokugcina senqubo yokubuyisela si ukulandelwa kwephasela nokubuyisela. Inqubo yokuqeda udoti wokubuyisela umkhiqizo iyahlelwa, noma yikuphi ukulungiswa okudingekayo nokulungiswa kabusha kuyenziwa, futhi imbuyiselo yakho kokubili ikhasimende nebhizinisi iyaphothulwa.
Ukuhlanganisa isixazululo se-RMS sokuphela siye ekupheleni kuzoba nemiphumela ebonakalayo, ehlala njalo kumabhizinisi e-e-commerce ngokombono wezezimali kanye nenkonzo yamakhasimende. Amathuluzi e-RMS nobuchwepheshe kungasiza izinkampani ukuba zifinyelele umphumela eziwufisayo ngokwandisa amamajini enzuzo, ukunciphisa ukulahlekelwa kwemali engenayo ngembuyiselo ebizayo, nokuthuthukisa ukwaneliseka kwamakhasimende. Njengoba abathengi beqhubeka nokwamukela i-e-commerce, amakhono e-RMS anikeza abathengisi ukuthula kwengqondo okudingekayo ukuze banikeze isevisi yamakhasimende esezingeni eliphezulu futhi basebenze ngokugxila ekusebenzeni kahle kwezindleko.
I-ReverseLogix iwukuphela kwesistimu yokuphatha yokubuyisela emuva ekupheleni, emaphakathi, futhi edidiyelwe ngokugcwele eyakhelwe ngokukhethekile ukudayisa, i-ecommerce, ukukhiqiza, kanye nezinhlangano ze-3PL. Kungakhathaliseki ukuthi i-B2B, i-B2C noma i-hybrid, inkundla ye-ReverseLogix isiza, iphathe, futhi ibike kuwo wonke umjikelezo wokuphila obuyayo.
Izinhlangano ezithembele ku-ReverseLogix ziletha okuhle kakhulu ikhasimende libuyisela umuzwa, yonga isikhathi sesisebenzi ngokugeleza komsebenzi okusheshayo, futhi ukhuphule inzuzo ngemininingwane engu-360⁰ yedatha yembuyiselo.
Funda kabanzi nge-ReverseLogix
Tags: 3plb2b2cb2cezokuhweba ngekhompyuthaukubuya kwe-ecommerceyokukhiqizaukubuyiselwa kwephaselaukulandelela iphaselaukulandelwa kwephasela nokubuyiselaukubuyiselwa kwezitoloubuyelaibuyisela isipiliyoniibuyisela izintoibuyisela uhlelo lokuphathaibuyisela ukucutshungulwaukubuyisela emuva izintoreverselogixama-rms